Komorebi: Kedu ka esi hazie tebụl anyị na esemokwu esemokwu? | Site na Linux
Na-aga n'ihu na nke anyị edemede banyere ahaziri, taa anyị ga-eweta ngwa dị ukwuu ma baa ezigbo uru maka ebumnuche a, akpọrọ Komorebi.
Ee Komorebi bụ a fabulous ngwa na-arụ ọrụ dị ka ihe mara mma na customizable njikwa akwụkwọ ahụaja (akwụkwọ ahụ aja) ofu na animated maka Linux, na ihe yiri ya Conky, na-enye anyị ohere inye pụrụ iche aka anyị Tebụl, iji gosi ha n’ime anyị ihuenyo gbaa ụbọchị anyị na-eme ememme anyị #DesktopDay.
Anyị agaghị agabiga oke ịkọwa ihe ọ bụ Komorebi, kemgbe, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 3 gara aga, anyị ekwuolarị banyere ngwa ahụ mgbe ọ dị na beta. Otú ọ dị, na-ehota nke ahụ gara aga metụtara post, anyị nwere ike ikwu na:
"Komorebi bụ onye njikwa mara mma ma mara mma maka distro Linux ọ bụla, ọ bụ ihe mepere emepe ma mepee ya na Vala site n'aka Abraham Masri. The ngwá ọrụ nwere customizable nzụlite na ike ga-ahazi n'ụzọ dị iche iche na n'oge ọ bụla, ọ nwere otutu ihuenyo nsio (animated, static, grajentị, n'etiti ndị ọzọ), na ha na-ọgaranya na dị iche iche nhọrọ na ngwá ọrụ na-enye anyị." Komorebi: A mara mma na customizable akwụkwọ ahụaja
N'ime akwụkwọ a dị ugbu a, anyị ga-elekwasị anya na ya otu esi eji nke ugbu a.
1.1 Iji Komorebi + Windows Header + AppMenu Module
Iji Komorebi + Windows Header + AppMenu Module
Iji kọwaa otu esi enweta Desktọpụ ahaziri iche na nke animated, dị ka nke egosiri na foto dị n'elu, anyị ga-eji a GNU / Linux Distro oku MX Linux 19.3, kpọmkwem onye Respin aha ya Ọrụ ebube.
Ihe mbụ ị ga-eme bụ ịwụnye Komorebi, na nbudata na gị gọọmentị webụsaịtị na GitHub, ihe ntinye ziri ezi maka a GNU / Linux Distro dị ka nke anyị ji maka nkuzi a, nke sitere na ya Debian 10 ma jiri XFCE. Iji mee nke a, ị nwekwara ike pịa njikọ ndị a: komorebi-2.1-64-bit.deb.
Mgbe ahụ, anyị ga-aga wụnye ya n'ụzọ kachasị mma maka nke ọ bụla. N'ọnọdụ anyị, anyị na-eji iwu iwu na-esonụ:
Mgbe arụnyere, anyị na-aga imezu ya site na ịchọ ya na Ngwa NchNhr, udi System. Ozugbo meghere, a ga-egbu ya site na ndabara, ọhụụ Isiokwu Desktọpụ Ndi an-kpọ (Desktọpụ Akwụkwọ ahụaja). Iji Nhazi Nhazi enweta site na ịpị aka na Desktọpụ. Banyere nke a, na na nhọrọ nke «Gbanwee na akwụkwọ ahụ aja» anyị nwere ike ịhọrọ nke anyị chọrọ.
Ebe ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbakwunye nke ọhụrụ, naanị anyị ga - edetuo folda dị adị site na ụzọ ahụ «/System/Resources/Komorebi/» ma nyegharịa ya. Wee dochie faịlụ ndị ahụ «video.mp4» y «wallpaper.jpg», site na ndị anyị masịrị idebe otu aha. Ya mere, anyị nwere ike ịhụ ma họrọ ya na Nhazi Nhazi, rụọ ọrụ ya. Ihe a niile, dị ka a hụrụ na foto dị ala ozugbo.
Cheta na: Anyị video (animated ndabere) anyị ebudatara na weebụ Desktọpụ.
Maka ndị chọrọ ịhazi a Global Menu maka ngwa gi na OSdị Mac OS karịa XFCE, dị nnọọ tinye a Extra n'elu panel (Panel 2), ma tinye ihe ndị a na ya: «Windows Header - Buttons» y «Módulo AppMenu». Dị ka a hụrụ na foto ndị a n'okpuru:
Ozugbo emechara usoro ndị a niile, na ya na ya kwekọrọ GNU / Linux Distro con XFCE na iji Komorebi y AppMenuOnye ọ bụla ga-enwe a onwunwu ọhụrụ Desk na-egosi anya na ha mmasị Group ma ọ bụ Community, na kpọmkwem ụbọchị ndị «DiaDeEscritorio».
Ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji a Conky dị ka nke a hụrụ ọtụtụ n’elu, anyị na-akwado ịgụ ọkwa anyị gara aga metụtara Nke Conky:
Conkys: Etu esi hazie ndi Conkys anyi ka ha ghara iji Neofetch?
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Komorebi», na fabulous ngwa na-arụ ọrụ dị ka ihe mara mma na customizable onye njikwa nke akwụkwọ ahụ aja maka Linux, nke ahụ dịkwa ka Conky, na-enye anyị ohere inye anyị aka pụrụ iche Tebụl, iji gosi ha n’ime anyị ihuenyo gbaa ụbọchị anyị na-eme ememme anyị «DiaDeEscritorio»; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Komorebi: Etu esi hazie tebụl anyị na esemokwu esemokwu?